မင်းသိင်္ခ Web Portal မှတစ်ဆင့် http://bit.ly/mtk_ltyaအခုပဲ ဗေဒင်မေးလိုက်ပါ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ကလေးအမည်ပေးနှင့်လုပ်ငန်းအမည်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ မေးခွန်းအရေအတွက်အလိုက်အနည်းဆုံး ၂၀၀၀ ကျပ် မှအများဆုံး ၅၀၀၀ ကျပ် ကျသ့င်ပါမည်။ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ လက်ရင်း တပည့်များမှ ဗေဒင်မေးမြန်းသူ တစ်ဦးစီအတွက် ကံကြမ္မာ ဟောကိန်းများကို သီးသန့် တွက်ချက် ပြီးဗေဒင်အဟောများကို မေးမြန်းပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း ပေးပို့သွားပါမည်။Hot Line-09400773134,09895544320
From 2000MMK to 5000MMK
မကြာခဏ မေးတတ်သော မေးခွန်းများ ( မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် )
မေး : မင်းသိင်္ခ App / Website ဆိုတာဘာလဲ။
ဖြေ : မင်းသိင်္ခ App နှင့် Website သည် ဗေဒင်မေးမြန်းမှုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဆားဗစ်ဖြစ်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ App နှင့် Website တွင် ဗေဒင်မေးမြန်းသူများသည် မိမိ မေးမြန်းလိုသော ဗေဒင်ဆရာ တစ်ဦးချင်းစီကို MPT ဖုန်းဘေလ်အသုံးပြု မေးမြန်းနိုင်ပြီး၊ ဗေဒင်ဆရာများမှ ငွေပေးချေပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းအသံဖိုင်ဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသော ဗေဒင် ဝန်ဆောင်မှု ဆားဗစ်ဖြစ်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဆားဗစ်တွင် ဟောကြားပေးနေသော ဗေဒင် ဆရာ/ဆရာမ များသည် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ရင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။
မေး : ဗေဒင်ဘယ်လိုမေးရမလဲ။
ဖြေ : ဗေဒင်မေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသိင်္ခ App (ဆော့ဝဲလ်) သို့မဟုတ် Website က တစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်းသိင်္ခ App မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Google Play Store မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Google Play Store >> http://bit.ly/mtk_play
Website မှ တိုက်ရိုက်မေးရန် >> http://bit.ly/mtk_lotaya
မေး : ဘာတွေမေးလို့ရလဲ။
ဖြေ :အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊
ပညာရေး၊ လူမှုရေးအထွထွေ၊ ကလေးအမည်ပေး၊ လုပ်ငန်းအမည်ပေး
မေး : ဉာဏ်ပူဇော်ခက ဘယ်လောက်လဲ။
ဖြေ : မေးခွန်းအမျိုးအစား (၁)ခုကို ၂၀၀၀ ကျပ်၊ (၂)ခုကို ၃၀၀၀ ကျပ်၊ (၃)ခုကို ၄၀၀၀ကျပ်၊ (၄) ခုကို ၅၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖြေ :အမည်ပေးများအတွက် ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကလေးအမည်ပေး၊ လုပ်ငန်းအမည်ပေး တို့ကတော့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကလေးအမည်ပေးမေးမြန်းပါက ကလေး တစ်ဦးအတွက်အမည် ငါးခု ပေးပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လုပ်ငန်းအမည်ပေးမေးမြန်းပါက လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက်အမည် ငါးခု ပေးပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေး : ဉာဏ်ပူဇော်ခကို ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ။
ဖြေ : ဉာဏ်ပူဇော်ခကို MPT ဖုန်းဘေလ် ဖြင့် တိုက်ရိုက်ပေးချေလို့ရပါတယ်။
ပြည်ပမှ မေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Visa/Master Card များနဲ့ ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
Visa/Master Payment Link >> https://t.2c2p.com/qp/1YE1
မေး : ဗေဒင်အဖြေကို ဘယ်အချိန်ပို့ပေးမှာလဲ။ ဘယ်လိုပို့ပေးမှာလဲ။
ဖြေ- : ဗေဒင်အဖြေကို ငွေပေးချေပြီးချိန်မှစ၍ ၄၈ နာရီအတွင်း ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဗေဒင်အဖြေကိုအသံဖိုင်ဖြင့် မင်းသိင်္ခ App ထဲကို ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အသံဖိုင်အဖြေရရှိကြောင်း SMS လည်း ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေး : ဗေဒင်အဖြေကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။ ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ။
ဖြေ : ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ၊ App User တွေအတွက် မင်းသိင်္ခ App ထဲဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
ဗေဒင်အဖြေကြည့်ရန်ကို နှိပ်ပြီး ဆရာရဲ့အသံဖိုင်ကို နားထောင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
Web User တွေအတွက် မိမိဆီကိုအဖြေအဟော Link တစ်ခု SMS ကနေရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ထိုအဖြေအဟော Link ကို နှိပ်ပြီး ဆရာရဲ့အသံဖိုင်အဖြေများကို နားထောင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျ
မေး : မင်းသိင်္ခ App ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးသွားရင် ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။
ဖြေ : ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးသွားရင် မင်းသိင်္ခ App ကိုဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
ဖွင့်ပြီးသွားရင်အချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုရန် Deny, Allow တွေ့ပါက Allow ကိုသာ ဆက်နှိပ်သွားပါခင်ဗျာ။
Gmail (သို့မဟုတ်) Facebookအကောင့်ဖြင့် Login ဝင်ရောက်ပါ။
Sing in With Google (သို့မဟုတ်) Login With Facebook ဖြင့် ဝင်ရောက်ပြီး ဗေဒင်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
မေး : ဗေဒင် ဆရာ/ဆရာမ ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့ရမလား၊ လိပ်စာရော ပေးပါလား။
ဖြေ : ဝမ်းနည်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဗေဒင်ဆရာရဲ့ Privacyအရ ဖုန်းနံပါတ်၊နေရပ်လိပ်စာကိုတော့ ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။
မင်းသိင်္ခ App ထဲမှသာ ဗေဒင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေး : ဆရာက မွေးနေ့သက္ကရာဇ်မှားပြီး ဟောထားလို့ပါ။အဲဒါ ပြန်ဟောပေးလို့ရမလား။
ဖြေ : မေးမြန်းသူက မွေးနေ့သက္ကရာဇ် မှားပြီး မေးတာဆိုရင်တော့ ပြန်မဟောပေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ဆရာက မှားပြီးတွက်ထားတာဆိုရင် ပြန်ဟောပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေး : ဘဝတစ်သက်စာအတွက် ဟောပေးပါသလား။
ဖြေ : တစ်သက်စာအတွက်တော့ ဟောပေးခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။
မေး : မင်းသိင်္ခက မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ မင်းသိင်္ခ App မှာ ဘယ်သူတွေက ဟောပေးတာလဲ။
ဖြေ : ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ တပည့်များက ဟောပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး :အဆင်မပြေတာတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမလဲ
ဖြေ : မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Hotline – 09400773134, 09783700048, 09400083375 တို့ကို
နေ့စဉ် နံနက် ၉:၃၀ မှ ၆:၃၀အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်းသိင်္ခ app တွင်အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် ကဏ္ဍများ
Frequently Asked Questions ( Min Thein Kha Baydin Application )
Q : What is Min Thein Kha App/Website service?
A : Min Thein Kha service is an Astrology service available in App & Website. The user can select the Astrologer and ask for Astrology Predictions on Min Thein Kha service using MPT Airtime Bill. The Astrologer will reply within 48 hours after the payment with Audio File for the prediction. The Astrologers on Min Thein Kha service are close disciples of Sayargyi Min Thein Kha.
Q : How to ask astrology questions?
A : You can ask questions via website or by using Min Thein Kha application
If you do not have it, please download at Google Play Store.
Website >> http://bit.ly/mtk_lotaya
Q : What kind of questions can I ask?
A : Love, Marriage, Own Business, Jobs, Health, Financial, Education, Social issues.
Baby Name, Business Name
Q : How do you charge per question? Let me know the price.
A : 2000 Ks for one question, 3000Ks for two questions, 4000Ks for three questions and 5000Ks for four questions.
A : 5000 Ks for naming questions.5000 Ks for new born child naming question and new business question.5names for new born Child and5names for Business Names will be provided by the Astrologer.
Q : What is your payment? How can I pay for it.
A : You can pay directly by MPT. You can make payment with MPT SIM.
For Oversea Users, you can make payment with Visa/Master Card
Q : When do you send the astrology answer? And how?
A : After payment, you will be sent the audio answer file within 48 hours in Min Thein Kha application.
And we also will send the SMS that you got the audio answer file.
Q : How can I check the answer? I don’t know where to see the answer.
A : Please open Min Thein Kha application.
Go to the Answer Box ( Baydin A Phye A haw ) and Click the Answer button.
Listen the audio answer file.
Q : I’ve already download Min Thein Kha app. But I don’t know how to proceed it.
A : Please open Min Thein Kha App. You will see two options. Sign in with Google or Log in with Facebook. You can log in with one of them.
Q : May I know the astrologer contact number and address?
A : We are sorry for that. We cannot provide any contact number of astrologers.
You can ask any questions by using Min Thein Kha application. Thank You.
Q : My date of birth is wrong in the answer audio file. Can you check and resend the predictions?
A : If it is your wrong date of birth since you send the questions, we cannot provide the answer again. But the astrologer was wrong of your date of birth, we will provide the correct answer predictions.
Q : Can I ask life time predictions for me?
A : Sorry, we cannot provide life time predictions.
Q : Astrologer Min Thein Kha already passed away. Who is managing this app? Is this app Fake?
A : The disciples of Astrologer Min Thein Kha provide predictions.
Q : How can I contact for any complaints?
A : Min Thein Kha Hotline – 09400773134, 09783700048, 09400083375
9:30 AM to 6:30 PM ( Daily )
Fortune for Friends
Fate Partnership Matching
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်အလက်များ
၁။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Mobile App နှင့် Website ဝန်ဆောင်မှုအကြာင်း
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Mobile App နှင့် Website သည် တစ်ပတ်စာ၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်းများအခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်သော
Mobile App နှင့် Website ဖြစ်ပြီး ဗေဒင်ဆရာဆီကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုဘဲ Mobile App နှင့် Website မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်သော မြန်မာ့ပထမဆုံးအွန်လိုင်းဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Mobile App နှင့် Website တွင် ဟောကြားနေသော ဗေဒင်ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်များဖြစ်ပြီး ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ ညီအရင်းဖြစ်သူ ဆရာဦးဝင်းဇော်၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မင်သိင်္ခဗေဒင် Mobile App နှင့် Website တွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရသော ဝန်ဆောင်မှုဟူ၍ ဝန်ဆောင်မှု ( ၂ ) မျိုး ရှိပါသည်။
မိမိတစ်ဦးချင်းအတွက် သီးသန့်ဗေဒင်မေးမြန်းခြင်းကဏ္ဍကို ကျသင့်သော ဉာဏ်ပူဇော်ခဖြင့် ပေးချေ
မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်နေရာဘဲ ရောက်ရောက် ဖုန်းတွင် မင်းသိင်္ခ Mobile App နှင့် Website ရှိနေပါက
ကြိုက်နှစ်သက်ရာဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး မိမိ၏ ဖုန်းဘေလ်ဖြင့်အချိန်မရွေး၂၄ နာရီ ဗေဒင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဗေဒင်မေးမြန်းငွေပေးချေပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း ဗေဒင်အဖြေအဟောကိုအသံဖိုင်ဖြင့် Mobile App နှင့် Website တွင် ပေးပို့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခဗေဒင် ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ယခု ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူထံ ကြိုတင်အသိပေး၍ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်အသိမပေးပဲဖြစ်စေ လိုအပ်သလို မွမ်းမံမည် (သို့) ယခုဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မင်းသိင်္ခ Mobile App နှင့် Website ကိုအသုံးပြုပြီး ဗေဒင်မေးမြန်းလိုပါက MPT, Telenor, Ooredoo စသည့် ဆင်းကဒ်တစ်ခုခုအသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခ ( တစ်နည်း ဉာဏ်ပူဇော်ခ ) ကို ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ ဖြတ်တောက်နှုတ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ( ဉာဏ်ပူဇော်ခ) ကိုအထွေထွေမေးခွန်းများအတွက် ကဏ္ဍ (၁) ခုလျင် ၂၀၀၀ ကျပ်၊ ကဏ္ဍ (၂) ခုလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်၊ ကဏ္ဍ (၃)ခုလျှင် ၄၀၀၀ ကျပ်၊ ကဏ္ဍ (၄) ခုလျှင် ၅၀၀၀ကျပ်ဖြင့် မေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပြီးအထူးသီးသန့်မေးခွန်းကဏ္ဍများကို မေးခွန်းတစ်ခုလျှင် ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
( က ) အထွေထွေမေးခွန်းကဏ္ဍများ ( မေးခွန်း ကဏ္ဍ ၁ ခု လျင် ၂၀၀၀ ကျပ် )
အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး
( ခ ) အထူးသီးသန့်မေးခွန်း ကဏ္ဍများ
ကလေးအမည်ပေး ( ၅၀၀၀ ကျပ် )
လုပ်ငန်းအမည်ပေး ( ၅၀၀၀ ကျပ် )
ရက်ကောင်းရက်မြတ် ( ၅၀၀၀ ကျပ် )
၃။ ဝန်ဆောင်ခ ငွေပေးချေခြင်း
(က)အခွန်ခအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအသီးသီးအလိုက်အခကြေးငွေတို့ကို ပေးချေ၊ ကျခံရမည့်အပြင်အင်တာနက်အသုံးပြုခများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာတို့၏ သတ်မှတ်နှုန်းထားနှင့်
အညီ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) SMS, Mobile Dataအသုံးပြု ခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုခ ကို သုံးစွဲသူမှ ကျခံရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိသဘောတူပါသည်။
အထက်ပါအခကြေးငွေဖြင့် ရယူသည့် ဝန်ဆောင်ခအားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူတို့အသုံးပြုသည့်သက်ဆိုင်
ရာ မိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာ၏ ဖုန်းဘေလ်မှတစ်ဆင့် ပေးချေခြင်းကို မိမိအနေဖြင့် သဘောတူညီပါသည်။
(ဂ) သတိပြုရန်မှာအခြားတစ်ယောက် (သို့)အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက မိမိဖုန်းကို ယူသုံး၍ဖြစ်စေ
(သို့မဟုတ်) မိမိဆင်းကတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေအထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲခအားလုံး
အတွက် သင့်ဖုန်းဘေလ်ထဲမှအခကြေးငွေများကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ မိမိအနေဖြင့်
အခြားတစ်ယောက်၏ ဖုန်းကိုယူသုံးပါက (သို့မဟုတ်) မိမိအသုံးပြုသည့်ဖုန်းခ/အင်တာနက်ခကို
အခြားတစ်ယောက်ယောက်မှ ပေးဆောင်နေပါက ယခုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုမီအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ
သဘောတူညီမှုရယူပြီး ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ယူပါသည်။
(ဃ) မင်းသိင်္ခ app တွင် ဗေဒင်မေးမြန်းသည့်အခါ မိမိကိုယ်တိုင်မေးမြန်းသည် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားမေးမြန်းသည်
ဖြစ်စေ၊အပြန်အလှန် နှစ်ဦးသဘောတူ သိရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ မသိရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုကို ကျခံသည့် ဖုန်းနံပါတ်
ပိုင်ရှင်သည်အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေမျာကို သိရှိထားပြီး တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
၄။ ဗေဒင်အမေးအဖြေ ဝန်ဆောင်မှု
အခကြေးငွေဖြင့် ဗေဒင်မေးမြန်းပြီးနောက် ဗေဒင်အဖြေကို ချက်ခြင်း ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဗေဒင်မေးမြန်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုရယူပြီးချိန် ( ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ပေးချေပြီးချိန် ) မှစ၍ ၄၈ နာရီအတွင်း
ဗေဒင်မေးထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS စာတိုဖြင့် Website တွင် နားထောင်ရမည့် Link သော်လည်းကောင်း၊ မင်းသိင်္ခ Application ထဲသို့လည်းကောင်း ဗေဒင်အဖြေအသံဖိုင် ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄၈ နာရီ ကျော်၍အဖြေမရရှိသေးပါက မင်းသိင်္ခ Hotline နံပါတ် ၀၉၄၀၀၇၇၃၁၃၄ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မင်းသိင်္ခ Mobile Application နှင့် Website ထဲတွင်ရှိသည့် မည်သည့် ဟောစာတမ်းများ၊ စာသား၊အကြောင်းအရာ၊ ဗေဒင်ဆရာပုံများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ မှန်သမျှ
အားလုံးကို မသမာသော စိတ်သဘောဖြင့် ရယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ကူးယူဖော်ပြခြင်း၊ တရားမဝင်အသုံးချခြင်းမပြုလုပ်ရ။
Min Thein Kha Astrology Service Terms and Conditions
1.1 Min Thein Kha Online Astrology service is available in Mobile App & Website.
1.2 Min Thein Kha Mobile App & Website is the very first online service to ask directly the astrologers who are the disciples of famous astrologer, Min Thein Kha. Min Thein Kha Mobile App and Website has officially the legal right to use the name and image/brand of Min Thein Kha with the permission from Min Thein Kha’s brother, U Win Zaw.
1.3 There are two types of astrology service which are free of charge predictions and paid questions to astrologer for the individual questions.
1.4 Everyone can get paid service for direct question to astrologers in Min Thein Kha Mobile Application & Website using air-time top-up bill anywhere and anytime. The answer for individual questions will be sent within 48 hours after the customer have paid. The answer would be in Audio format and will be available to get on Mobile App and Website. Min Thein Kha astrology service can change as necessary (or) stop the service with or without any prior notice to the customers.
Paid Astrology Service
You can ask astrology questions and get paid by using any SIM card from MPT, Telenor and Ooredoo Operators. The service charges will be deducted from your SIM’s main balance.
There are two types of paid question services as below:
One General Question (2000 MMK), Two General Questions (3000 MMK), Three General Questions (4000 MMK), Four General Questions (5000 MMK)
General Question Categories - Love, Marriage, Business, Jobs, Finance, Social, Education, and Health
Special Question ( 5000 MMK )
Special Question Categories - (i) Baby Name , ( ii ) Business Name, and ( iii ) Special Day
Agreement of making payment and Your responsibilities
This agreement starts when you start using our services. You acknowledge your acceptance of this agreement each time as you use the services.
You acknowledge and have to pay service charges including tax and all mobile data rate as the terms and conditions of Mobile Operators.
You acknowledge and accept all mobile data charges such as SMS, downloading data and our astrology service charges to be deducted from your SIM’s main balance.
Please be aware of the facts that all data and service charges will be deducted from current SIM card owner. It is your obligation that you have already an agreement from SIM’s owner If you use the other’s SIM card for our service fee,
It is your responsibilities that you keep your SIM Card and Mobile Device since you are an authorized person to remotely access your mobile data and services in order to perform any tasks. When you get paid for our service by yourself or on behalf of others, we assume that both of you must have already an agreement for our services. If not, the SIM owner will take responsibilities for our service charges deducted.
Getting audio answer
You agree and acknowledge that you will not get the answer immediately after making payment.
You will get SMS with the link on Website for audio file and the answer will be sent to the Mobile Application within 48 hours.
If you don’t get answer over 48 hours, please contact our hotline 09400773134.
You are NOT ALLOWED to use illegally everything and contents such as predictions, photo, graphics in any way from Min Thein Kha Website & Mobile Application.